BBC Somali - Ganacsi - Ganacsiga daawooyinka iyo dalxiiska Tunisia
Ganacsiga daawooyinka iyo dalxiiska Tunisia
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Mey, 2012, 15:47 GMT 18:47 SGA
Tunisiya ayaa ah wadan aan lahayn qayraad badan oo dabiici ah ama warshado badan waxay lacagta ugu badan uu wadanka ka helaa dalxiiska.
Daawooyinka ayaa ah waxyaabaha daruuriga u ah biniaadanka, laakiiin waxay u tahay qatar wayn biniaadanka hadaan la ilaalin tayada daawooyinka iyo sharuuudaha dadka ka ganacdsada.
Sanad walba kumanaan qof ayaa ku dhinta adduunka oo laga iiibiyay daawooin been been ah oo sun ah.
Dr Saciid Cumar Muse wuxuu leeyahay Farmasiyaha Horn of Afrika ee Djibouti wuxuuuna bartay cilmiga daawoooyinka ayaan ka waraysanay ganacsiga daawoooyinka dalka Djibouti.
Tunisiya ayaa ah wadan aan lahayn qayraad badan oo dabiici ah ama warshado badan waxay lacagta ugu badan uu wadanka ka helaa dalxiiska. ilaa sanadkii 2010ka waxaa sanad kii imaan jiray Tunisa 7 milyan oo qof oo dalxiisayaan ah.
Laakiin rabshadihii ka dhashay kacdoonkii sanadkii hore ayaa hoos u dhigay dalxiiskii Tunisiyya afartan boqolkiiba.
Tunisiya ahada waa meel amaan ah hadaba siday daklxiisayaasha u imanayaan Tunisia.
Wariyaha BBCda Simon Atkinson ayaa ka waramaya
Hay'dda KAABA waxay ka mid tahay hayadaha dhiiba daymaha amaahda yar yar magaalada Hargaysa. Wadamada deeqaha bixiya ayaa kord inay deeqo siiyan shirkadaha iyo hayadaha daymaha yar yar bixiya si ganacsatada yar yar ay u helaan lacag ay ganacsi ku samaystaan.
Hayada Kaaba ayaa bilowday mashruuc amaah ay ku siineyso kombuyuutarro dhallinyarada iyo ganacsatada yar yar ee aan awoodi karin inay iibsadaan kombuter ay ku shaqeystaan .